पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री ईमरान खानले यी महिला सँग शारिरीक सम्पर्क राख्न खोजेको गंभिर आरोप !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /International News/पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री ईमरान खानले यी महिला सँग शारिरीक सम्पर्क राख्न खोजेको गंभिर आरोप !!
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री ईमरान खानले यी महिला सँग शारिरीक सम्पर्क राख्न खोजेको गंभिर आरोप !!
एजेन्सी । एक अमेरीकी महिला सिंथिया डि रेचीले पाकिस्तानका एक जना पूर्व गृहमन्त्री माथि ब’ला’त्का’रको आरोप लगाए पछि अहिले संसारका मिडियामा खबर छाईरहेको छ । उनी लामो समयदेखि पाकिस्तान प्रेमी, एडभेन्चरीष्ट र फिल्म निर्माता भन्दै ईस्ला माबादमा रहदै आएकी छिन् ।
पाकिस्तानलाई प्रेम गर्ने भन्दै लामो समयदेखि ईस्ला माबादमै बसेकी र पाकिस्तानी पिपल्स पार्टीका नेताहरुसगँ राम्रो सम्बन्ध बनाएकी सिंथियाले पूर्व गृहमन्त्री रहमान मलिकमाथि ब’ला’त्का’रको आरोप लगाएकी थिईन् ।
रहमान मलिक भूतपूर्व प्रधान मन्त्री बेने जिर भुट्टोको ह’त्या हुनुअघि उनका सुरक्षा ईन्चार्ज थिए । तर तिनै मलिकलाई पछि प्रधानमन्त्री असिफ अलि जर्दारीले गृह मन्त्री बनाएका थिए । तीनै महिला सिंथियाले पाकि स्तानका बर्तमान प्रधानमन्त्री ईमरान खानले पनि आफूसगँ से’क्स गर्न खोजेको कुरा आपू लाई बताएको पत्रकार तथा सिंथियाकी साथी रहेकी पाकिस्तानी महिला अलि सलिम ( बेगम न वाजिश)ले दाबी गरेकी छन् । उनीहरु दुबै जना केही समय सगैँ अपार्टमेन्टमा रहने गरेका थिए ।
ह’त्या गरिएकी भूतपूर्व प्रधानमन्त्री भुट्टोका बारेमा समेत आ’पत्ति जनक टिप्प्णी गरेर विवादमा परेकी तिनै सिंथिया शूरुमा पाकिस्तान पिपल्स पार्टीका नेताहरुस्गँ राम्रो सम्बन्ध बनाए पनि पछि सम्बन्ध बिग्रिए पछि पिपि ईको बिरु द्ध उभिएकी थिईन् ।
त्यस पछि उनीमाथि विभिन्न मुद्धाहरु दर्ता भएर पाकि स्तानी संघयि जाँच एजेन्सीले अनुसन्धान गरीरहेका बेला उनले ब’ला’त्का’र र यौ’न सम्बन्धि नयाँ आरोप लगाएकी हुन् । उनीमाथि रहमान्ले सन् २०११ मा ब’ला’त्का’र गरेको दाबी सि थियाको छ ।
धेरैले यसलाई आफू अनुसन्धान र कार्बाही बाट जोगिन उनले आरोप लगाएको अर्थमा पाकिस्तानमा चर्चा भईरहेको छ । उनले पाकिस्तान आफ्नो दोस्रो घर भएको समेत बताएकी छन् । उनी दश बर्षदेखि पाकिस्तानमा रहदै आएकी छन् । उनले ट्वीटरमा भिडियो सन्देश नै जारी गरेर यो आरोप लगाएकी छन् ।कान्तिपथ बाट
भारतीय र चिनियाँ सैनिकबीच फेरि भि-डन्त !